Pornographic Arts Saameynayaa Caafimaadka - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Pornography waxay saameysaa caafimaadka
Xirfadlayaasha daryeelka caafimaadku waxay ka warbixinayaan kor u kaca halista ah ee cudurada maskaxda iyo cilladaha maskaxda ee dhalinyarada maanta. Dad badan oo waaweyn ayaa la kulma dhibaatooyin caafimaad galmada. Ma runbaa in filimada qaawan ay saameyso caafimaadka? Cilmi baaris ayaa tilmaameysa saameynta isticmaalka qasabka ah ee fara xumeynta internetka ee caafimaadka maskaxda. Xaaladahan ayaa si gaar ah u saameeya ragga. A 2015 Review by Love et al. dawladaha
Warka fiicani waa dib u soo kabashada. Waxay ka caawisaa haddii aad fahamto sida maskaxdu is bedesho markaad la kulanto waxyaabo kala duwan noloshaada.
Qaybtan Qaybta Reward Foundation waxay soo saartaa siyaabooyin badan oo caafimaadkeena saameyn ugu yeelan karo isticmaalka internetka. Waxaan diirada saarnaa sawir-gacmeedka internetka.
Isticmaalka pornography ee internetka ayaa bedeli kara maskaxda iyo bedelida jirka bini'aadamka. Waxay dadka u horseedi kartaa in ay horumariyaan dabeecadaha galmada ee dhibaatada leh oo ay ka mid yihiin qabatimid. Si fudud u qeex, sawir-qaadidda Waxan ku soo aruurineynaa qodobada bogagga soo socda.